चीनमा जस्मिन फूल प्रतिबन्धित,कारण झन रोचक ! - Himalayan Kangaroo
चीनमा जस्मिन फूल प्रतिबन्धित,कारण झन रोचक !
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ मंसिर २०७२, शुक्रबार ०५:०० |
एजेन्सी । सुन्दरता र कोमलताको प्रतीक मानिने फूल कसलाई पो मन नपर्ला ?
यसको पवित्रतामाथि विश्वास भएरै होला मन्दिरमा हुने पूजाआज पनि फूल नै चढाइन्छ । थरि थरिका फूलहरुमध्ये चमेलीको फूल अर्था जस्मिन फ्लावर पनि अत्यन्त सुन्दर फूलमा मानिन्छ । तर यो फूल चीनमा भने प्रतिबन्धित छ । त्यसैले चीनमा यो फूलको बोट रोप्न पाइदैन ।
रोचक कुरा त के हो भने यो फूलमात्र होइन, यससंग जोडिका हरेक चीज चीनमा प्रतिबन्धित छ । जस्तो कसैले पनि आफ्ना वच्चा वा कम्पनीको जस्मिन राख्न पाइदैन भने यो फूलको नाम लिएर कुनै गीत गाउँदा पनि कारवाहीमा परिन्छ ।
यति सुन्दर फूलमाथि चीनको किन यति धेरै घृणा ? यसको कारण हो सन् २०११ मा ट्युनेशियामा भएको ‘ज्यासमिन रिभोलुसन’ अर्थात जस्मिन क्रान्ति । त्यही आन्दोलन पछि चीनले यो फूलसंग जोडिएको हरेज चीजमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
Previousभारतीय नाकाबन्दीको मुख्य योजनाकार बाबुराम भट्टराई !
Nextयसरी तयार पार्नुहोस स्वादिलो ‘पोलेको माछा’
१३ पटक परीक्षामा फेल भएपछि २ चिकित्सक पक्राउ
१४ चैत्र २०७२, आईतवार ०१:५१